I-Condo Ekahle Epholile E-BASE_Unit# 3420 - I-Airbnb
I-Condo Ekahle Epholile E-BASE_Unit# 3420
Winter Park, Colorado, i-United States
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Caprice
U-Caprice Ungumbungazi ovelele
I-studio condo ethokomele nesimangalisayo esezansi kwe-Winter Park Resort ngezinyawo zemizuzu engu-2 ukuya ku-10-Person Gondola entsha, ama-Sihlalo, i-Ski School & Resort Village. Isithuthi samahhala esidingekayo siyatholakala ezivakashini. Imininingwane yokuxhumana yabelwe ngaphakathi Iziqondiso Zokwamukela.
Hlala kule-studio esihle kakhulu esisezansi kwe-Winter Park Resort. Ukufinyelela ngokuqondile kubhavu wamanzi ashisayo omangalisayo, indawo yomlilo enamacala amabili, ama-BBQ grill, izihlalo zokuphumula, amatafula, nokubukeka okuhle ku-Deck Amenity. Ngohambo olufushane oluya emathafeni, le ndawo enesitudiyo inakho konke okudingayo! Gcwalisa ngekhishi elincane elihlanganisa ifriji encane, i-microwave enehhavini ye-convection, isitofu, i-toaster, nomshini wokwenza ikhofi.
Iyunithi yesitudiyo inefenisha yamashidi ahlanzekile nezinto zokugeza eziyisisekelo Kulala abantu abane (4) ngombhede omkhulu nosofa omkhulu. I-TV entsha sha, i-fireplace yegesi, i-Wi-Fi, ne-cable. Iyunithi iza ne-ski locker kanye negumbi lokukhiya ibhayisikili.
4.80 out of 5 stars from 206 reviews
4.80 · 206 okushiwo abanye
Indawo yethu ise- Fraser Crossing ngaphansi kwe-Winter Park. Kulula kakhulu ukushushuluza eqhweni , ubhavu wamanzi ashisayo, eduze kwama-lift nedolobhana, indawo yokupaka neminye imisebenzi e-Winter Park.
UCaprice Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Winter Park namaphethelo